ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ အရမ်းမိုက်လွန်းတဲ့ သီချင်းလေး ကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မျက်ဝန်းရဲ့ သီချင်း ရုပ်သံ – Online News Post
ကိုယ်တိုင်သီဆိုထားတဲ့ အရမ်းမိုက်လွန်းတဲ့ သီချင်းလေး ကို ချပြလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မျက်ဝန်းရဲ့ သီချင်း ရုပ်သံ
မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း တစ်ယောက် သူမ ကိုယ်တိုင် သီဆို ထားတဲ့ သီချင်း လေးကို ပရိသတ် တွေအတွက် တင်ပေး လာတာပဲဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမ က တော့ သီ ချင်းလေး ရဲ့ နာမည် လေးဖြစ်တဲ့ ” အပြစ်မဲ့သက်သက် ” caption လေး နဲ့ တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ၊၊ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ရဲ့ သီချင်းကို ပရိတ်သတ် တွေ အတွက်ပြန်လည် မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်နော် … . မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် တဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ်ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် နော် ။ မော်ဒယ်လ် လောကကို ဝင် ရောက် တာ မကြာသေး ပေမယ့် ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှု ကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြစ်ပါ တယ် … .
ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှု ရရှိထားတဲ့ သူမ က တော့ social media လောက မှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။သူမ ရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက် စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေးဖြစ် တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသ တွေ ဝန်းရံ နေကြ တာ လည်းဖြစ် ပါတယ် ။ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများ ဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ရပါ တယ် နော် … .
ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း တစ္ေယာက္ သူမ ကိုယ္တိုင္ သီဆို ထားတဲ့ သီခ်င္း ေလးကို ပရိသတ္ ေတြအတြက္ တင္ေပး လာတာပဲျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမ က ေတာ့ သီ ခ်င္းေလး ရဲ့ နာမည္ ေလးျဖစ္တဲ့ ” အျပစ္မဲ့သက္သက္ ” caption ေလး နဲ႔ တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ၊၊ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း ရဲ့ သီခ်င္းကို ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္ျပန္လည္ မၽွေဝေပး လိုက္ပါ တယ္ေနာ္ … . ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ တဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ေကာက္ေၾကာင္း အလွကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ မ်က္ဝန္း ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ ေနာ္ ။ ေမာ္ဒယ္လ္ ေလာကကို ဝင္ ေရာက္ တာ မၾကာေသး ေပမယ့္ ပရိသတ္ အမ်ားအျပားရဲ့ အားေပး ဝန္းရံမႈ ကို တျဖည္းျဖည္း ရရွိ လာတဲ့ ေမာ္ဒယ္လ္ ျဖစ္ပါ တယ္ … .
ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြရဲ့ ဝန္းရံ အားေပးမႈ ရရွိထားတဲ့ သူမ က ေတာ့ social media ေလာက မွာ နာမည္ တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ ေနသူ တစ္ေယာက္ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။သူမ ရဲ့ ဆက္ဆီ က်ၿပီး အမိုက္ စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္ သူေလးျဖစ္ တာေၾကာင့္ လက္ရွိ ေဖ့ဘြတ္စာ မ်က္ႏွာ မွာ ေရပန္းစား လူႀကိဳက္ မ်ားကာ ပုရိသ ေတြ ဝန္းရံ ေနၾက တာ လည္းျဖစ္ ပါတယ္ ။ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေတြ ကို လူမႈကြန္ ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ား ဆုံး တင္ေလ့ ရွိ တာေတြ႕ရပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ဇာတိရွာလေးကိုပြန်ပြီး (၂၂)ပြည့်မွေးနေ့ကို အလှုလေးပြုလုပ်ပြီး ကျင်းပလိုက်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
Next post ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပုံလေးတွေ ကို ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဂန္တဝင်